Mandra-pahoviana ny famerenan'ny bisikileta? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Rahoviana no manolo pads frein bisikileta - fanapahan-kevitra azo ampiharina
Rahoviana no manolo pads frein bisikileta - fanapahan-kevitra azo ampiharina
Mandra-pahoviana ny famerenan'ny bisikileta?
AhoanaPads novakin'ny bisikileta lava farany? Ny halavan'ny anaovalizy am-bisikiletadia miankina amin'ny habetsaky ny fampiasana, ny toetoetran'ny tontolo iainana ary ny fikojakojana. Ny fitsipika ankapobe dia izanyfreins padafakaFARANYeo anelanelan'ny 500 1000 kilaometatra.
Ahoana ny fomba fanoloana pad padanao. Hanoro anao tsikelikely amin'ny alàlan'ny fanesorana sy ny fametrahana izahay. Na inona na inona ny bisikiletanao na ny fantson'ny kapila, dia ho anao izahay.
Mijanona miaraka aminay mba hahavitana tsara ny asa ary hianatra matihanina vitsivitsy amin'ny lafiny -Torohevitra. Mila soloina pads rehefa tonta na maloto, na amin'ny toe-javatra sasany dia mila ovaina fotsiny ireo fitaovana vita amin'ny pad noho ny antony fampisehoana. Miaraka amin'ny traikefa dia azonao atao ny mijery fotsiny ireo pad ary fantaro raha mila soloina izy ireo.
Amin'ny ankapobeny, ny pad dia mila soloina -Materaly ho 1mm farafahakeliny matevina, amin'ny alàlan'ny fametahana karatra fandraharahana 3 dia azonao atao ny mamorona fandrefesana mpamindra volo izay sahabo ho 1mm ny hateviny. Ireo pad ireo dia pad vaovao izay mila soloina, fa jereo miaraka amin'ny mpanamboatra anao ny famaritana ny akanjo ary ampiasao caliper ho an'ny refy marina. Ireo loto toy ny tsiranoka tapaka, menaka na menaka manimba dia mety hanimba ny padanao ary tsy mora tazana foana.
Pads frein maloto mety hahatonga ny freinsinao, mety mila ezaka bebe kokoa amin'ny levers ianao mba hampiadana anao, ary ny rotor sy pads dia mety hiseho maizina kokoa, miaraka amin'ny menaka azo kosehina. Ny loharanom-pahalotoana mahazatra dia ny fandosirana tafahoatra amin'ny aerosol lubricants na ny fivoahan'ny rafitra hydraulic. Ny fividianana robina vaovao mety amin'ny rafitrao dia mora lazaina kokoa noho ny vita.
Afaka mahita fivarotana bisikileta tsara foana ianao, mitondra ny bisikiletanao ary mangataka fanampiana. Azonao atao koa ny mitady topping iray izay mitovy endrika amin'ny endrik'ireo fononao taloha. Raha mitovy endrika aminy dia mety hiasa ny frein-nao.
Ny pads dia misy fitaovana hafa: metaly, organika ary semi-metaly. Ny mampiavaka azy ireo dia aseho amin'ity sary ity. Mety misy koa ny olana mifanentana eo amin'ny rotor material sy ny pad pad.
Hamarino ny fampitandremana rehetra Fitaovana mahazatra ilaina dia: Tondro fanjaitra ho an'ny freins misy fantsona cotter na pad tery Fitaovana iray misy fisaka amboniny toy ny PP-1.2 amin'ny fanindriana ao anaty piston Apetaho amin'ny fitoeram-panamboarana ny bisikileta.
Esory ny kodiarana. Handalo ny fanesorana ny endrika caliper malaza tsirairay izahay mba hahitanao ny iray izay toa anao. Ny volavola sasany dia manana pin nitazona izay miantoka ny pads.
Raha misy dia esory. Ity famolavolana ity dia mampiasa tsimatra mizara. Ahitsy ny sisiny hanalana azy ireo.
Ankehitriny isika dia afaka mamoaka ny pads amin'ny farany ambany. Ny endrika sasany dia manana clip penina. Raha misy dia esory alohan'ny hanesorana ny pin retains.
Amin'ity famolavolana ity dia afaka mamoaka pads eo an-tampony isika. Ny rafi-pad sasany dia mampiasa loharano izay esorina amin'ny pads. Mariho fa ny pads vaovao dia misy loharano vaovao.
Fa tsy ny freins rehetra no mampiasa loharano. Ity volavola ity dia mampiasa andriamby hitazonana pads amin'ny piston. Raha tsy manana pin nitazona ny frein-nao dia zahao raha misy loharano mivoaka avy eo ambony.
Ity famolavolana ity dia mitaky ny fanesorana ny lohataona aloha, avy eo azonao atao ny manala ireo pads etsy ambany, raha raikitra ny pads dia afaka manampy amin'ny famahana ny mpampifanaraka azy io. Ity famolavolana ity dia tsy misy lohataona mibontsina na mitazona pin, esory aloha ny pad ivelany, satria tsy afaka esorina aloha ny fonosana anatiny. Raha mikatona ny pads dia vahao ny mpanitsy.
Ity famolavolana ity dia mampiasa clip amin'ny pad mba hitazomana azy amin'ny toerany. Mety mila hery kely ny fanesorana ireo pads clipped. Ary amin'ny ohatra farany navoakantsika dia raiso ilay pad, afindrao avy eo dia sintomy.
Esory koa ny lohataona. Ary izany no hialana. Raha mbola tsy hitanao ny freins marina, raha toa ka mitovy amin'ny iray amin'ireo endrika efa naseho io dia tokony hiala tanteraka ireo piston.
Izy io dia mamorona toerana ho an'ny fitaovana pad fanampiny amin'ny pad vaovao an'ny calipre novonoina hydraulic, dia manosika ny piston hiverina fotsiny isika miaraka amin'ny fitaovana toy ny PP-1.2, leveran'ny kodiarana na ny kodiarana. NAOTY: ny làlambe TRP dia tokony hokarakaraina toy ny frein hydraulic.
Na dia misy tariby aza, dia mandeha ho azy ireo singa natsangana. Raha manana frein hidrano Shimano miaraka amina tendrombohitra fisaka ianao dia mitandrema bebe kokoa mba hametahana na dia ny tsindry amin'ireo piston aza mba tsy hanimba ireo piston vita amin'ny seramika. Raha tsindrio tsy nahy ny leveranao frein dia miverina ny piston dia tsy maintsy averinao ao anaty caliper fotsiny ianao.
Mihatra ihany ny tsindry mitovy aorian'ny fametrahana ireo pad. Raha tsindrio tsy nahy ilay lever dia aforeto miverina amina fitaovana toy ny piston PP-1.2 miaraka amin'ny lasely mekanika PRESSEFÜR ny mpanitsy mandra-pijanony.
Ny kalipera sasany dia manana fanitsiana tsy misy fitaovana ary ny sasany kosa mila fitaovana. Ny calipre sasany dia manana mpanitsy roa ary ny sasany manana iray. Ankehitriny rehefa esorina tanteraka ireo piston dia afaka manomboka manangona ireo pads isika.
Ny fametrahana dia mifanohitra amin'ny halavirana ary amin'ny lafiny hafa dia miverina amin'ny karazana freins isika. Fanamarihana haingana: ny pads napetraka araka ny tokony ho izy dia mihozongozona kely, ary ara-dalàna izany. Amin'ity ohatra ity dia mitazona pads amin'ny piston ireo andriamby.
Mila manangona ny pad anatiny aloha isika, avy eo apetraka ny pad ivelany. Ary vita izahay. Ity ohatra ity dia mampiasa andriamby ihany, fa tsy maninona izay pad apetrakao aloha ary misy pin retain izy io.
Ity famolavolana ity dia mampiasa clip amin'ny pad mba hitazomana azy amin'ny toerany. Mety mila hery kely ny fametrahana ireo pad clipped. Amin'ity maodely ity dia misy lohataona hitazomana ireo pads hanindry an'ireo piston.
Ny lohataona sasany dia tokony ho eo amin'ny toerana marina. Aorian'ny fampidirana ireo pad eo amin'ny lohataona dia mila mampifanaraka tsara ireo pad ianao ary mampiasa hery vitsivitsy hampiala azy ireo amin'ny toerana misy azy. Mety mila fanandramana maromaro ny fampifanarahana tsara ny pads sy ny loharano.
Amin'ity ohatra ity dia miditra aloha ireo pad ary avy eo miditra ny lohataona. Amin'ity maodely ity dia apetraka ny pads, ny pin retaintant misy kofehy, ary avy eo ny clip pin. Ity dia ohatra mampiasa pin pin hozatra, noho izany dia mila mahazo antoka isika fa mahazo tsipika tsara ilay tsimatra mizara.
Ho an'ny kalitao mekanika sy hydraulic, alao indray ny kodiarana ary alao antoka fa mipetraka tsara izy io. Miaraka amin'ny freins mekanika, aorian'ny fametrahana pad vaovao dia mila manamboatra ny kaliperinao ianao. Jereo ity lahatsoratra hafa ity.
Miaraka amin'ny freins hidina hydraulic, paompy ny lever mba hamerenany ireo piston sy pads hiverina amin'ny toerany. Ahodino ny kodiarana ary zahao ireo pads novakiny amin'ny fampifanarahana. Avereno jerena ny caliper mba hahitana tsara kokoa.
ny tantara tour de france
Raha tsy misy ny fikorontanana dia vita ianao. Raha manosotra ianao dia mety ho olana amin'ny fampifanarahana izany. Zahao ny lahatsoratray fampifanarahana valiha hydraulic.
Izao efa eo am-pelatananao ireo pad vaovao, dia vonona ny hitondra ianao. Raha nanampy anao ity lahatsoratra ity dia miangavy anao hisoratra anarana amin'ny fantsonay. Ny fikojakojana bisikileta dia fifangaroana tanteraka amin'ny fahatsorana sy fahasarotana, satria ny zavatra rehetra dia tsotra ampy hahazoana dikany, saingy mbola misy ampahany mihetsiketsika be dia be izay tokony hiarahan'ny rehetra miasa hahomby amin'ny fahombiazana.
Ary raha vaovao amin'ny fantsonao ianao dia aza hadino ny mijery ireo lahatsoratra fanitsiana derailleur any aoriana. Manana tamberina tsara izy ireo ary hataon'izy ireo mandeha tsara ny fiovanao. Misaotra anao amin'ny Watch.
Ahoana no ahafantarako raha efa tonta ny valin-dalako?
nytaratasim-bolany ain'nyfreins pad, Ianao dia milaFantarony hateviny. Mety mila jiro fanamoriana ianao hijerena tsara nyfreins pad. Raha nyfisaka sy mivelatramijery manify, latsaky ny 1/4 ', mety ho tonga ny fotoana hanoloana azy ireo. Amin'ny sasanyfreins pad, ianao angambaJEREO NYnyanaovan'ireofamantarana slotmidinany afovoan'nypad.
Ahoana no ahalalanao fa ratsy ny frein bisikiletanao?
Taratasim-bolamahitaRAHAnyny lalana diaglazed mihoatra ny famonjena:RAHAtsy afaka manoritra izany amin'ny hoho ianao, mila vaovaofreins pad. (Raha mbola any ianao,manamarina padhateviny: Ny ankamaroanyfisaka sy mivelatramanana tsipika famantarana ny akanjo, faRAHAtsia, ampiasao ho toy ny mpanondro anao ireo lava-bato.RAHAlasa izy ireo, nyfreins padmila soloina.)04.30.2010
Taorian'ny lahatsoratry ny TLC ho an'ny freins disc dia nanana fangatahana betsaka izahay momba ny TLC ho an'ny freins rim. Ary iza aho no handiso fanantenana anao? Ireto misy torohevitra fito ho anao hampiasanao ny frein-nao hampihena anao ary tsy hamela anao hidina. (mozika maneso) Ka raha hanamarina ny fehin-tànanao ianao dia hanampy anao alohan'ny tara.
Ny paoma freins dia mety ho tonta mampatahotra haingana, indrindra amin'ny andro ratsy. Voalohany aloha, zahao hoe ohatrinona ny fiainana sisa tavela. Ny freins sasany dia tena tsara tokoa satria manana tondro kely izay milaza aminao hoe rahoviana no hosoloina.
Fa ny sasany tsy. Ary ny fitsipika kely amin'ny ankihibe dia zavatra kely noho ny milimetatra sy sasany amin'ny fametahana frein ka lasa ianao sisa ary tonga ny fotoana hanoloana azy. Jereo àry ny tena frein pad ho anao ary jereo ny volony.
Raha fisaka sy haavo izy ireo dia tsara izany. Raha misy lalan-kazo iray dia mety mila apetraka izy avy eo ary nohamboarina mba hifanaraka amin'ny valin'ny freins. Ka ny olana amin'ireo pads tsy mifanaraka dia tsy tena hijanona ianao hahatratra ny fahaizanao feno.
Noho izany ianao dia mety ho freins eo amin'ny sisin'ny kodiarana na any amin'ny toeran-kafa eo amin'ny sisin-tany izay tsy misy ny freins mafy. Amin'ny ankapobeny mampidi-doza izy io ary tsy hahazo ny fampisehoana ilainao fotsiny ianao. Rehefa mampifanitsy ny pads frein, dia zava-dehibe ny fikasihan'ny eo anoloana ny sisiny, antsasaky ny milimetatra eo alohan'ilay lamosina.
Eny vola kely fantatro izany ary raha hainao? Raha tsy azonao tsara io haavon'ny antsipiriany io dia aza manahy, alao antoka fa ny pad iray manontolo dia mifandray amin'ny fotoana iray. Ny zava-dehibe indrindra anefa dia ny mikasika ny lamosina aloha. Ka zahao ny tena tahan'ny hainganana sy ny ranomaso ao aminao, ka zahao raha mijery haingana kokoa noho ny iray hafa ny iray amin'izy ireo.
Hamarino fotsiny fa mifototra ny frein. Azonao atao ny mamaha ny vodin-koditra fametahana azy eto ary ampifanaraho fotsiny izy io na ampifanaraho eto ny visy afovoany mba hahazoana antoka fa ny roa tonta dia mikasika ny Rimat amin'ny fotoana iray. Ka andao hojerentsika akaiky ireo paosy freins.
Raha manana lalan-drano na fantsona ao ianao dia tadiavo tsara ary jereo sao misy loto na vato. Raha izany dia safidio izy ireo satria hampihena ny fahombiazan'ny freins. Indraindray ireo metaly kely madinidinika dia tsy voamariky, dia tafiditra ao anaty fitambaran-drakitra.
Izy io koa dia afaka mampihena ny fampisehoana freins sy ny fanaovana akanjo aloha. Jereo fotsiny ireo ary alao antoka fa efa lasa daholo izy ireo. Indraindray ny pads anao dia mety mamiratra ary raha izany dia tsy miasa amin'ny fahombiazany feno izy ireo.
Ka izay atoroko anao dia ampiasao koa rakitra. Raha mampiasa rakitra ianao dia ataovy izay hahazoana antoka fa tsy nampiasa azy tamin'ny vy ianao na raha tsy izany dia hofoananao ny dingana teo aloha izay vao noresahintsika. Noho izany dia hametraka metaly hiverina ao anaty pad ianao.
Tsy izay tiantsika hatao eto. Ka na ampiasao ny rakitra misy fingotra fotsiny na taratasy fasika iray ary esory fotsiny ny sosona manify tena manify izay mamirapiratra ambonimbony y, ny tadin-drivotrao dia hipetaka tsara kokoa amin'ny sisiny ary hamaky anao haingana kokoa. Ka fanamarinana haingana ny tariby anatiny izao.
Hamarino tsara fa mifatotra izy eto, fa tsy mikorontana na tery mihitsy, ary avy eo raha azo atao dia zahao ao anaty lever ary alao antoka fa tsy misy tariby tariby izay tena voavaha ilay barika kely. Raha izany dia aza mitaingina bisikileta fa soloo ASAP ny tariby dia alao antoka fa tsy maninona ary ny akorandriaka ivelany miaro tsy misaraka mihitsy ary tsy misy korontana ao. Raha izany dia soloinao izany.
Ankehitriny ny freins-nao dia mety hahatsapa ho somary maharikivy, ary fanamboarana vetivety satria tsy misy fahatsapana tsara noho ny mametraka tariby vaovao, mametraka menaka vitsivitsy fotsiny ary avela hiasa, fa ahoana? Raha te hanao izany ianao dia tsy maintsy avadikao ny bisikiletanao, izay tsy ekeko matetika, fa eny, asio menaka vitsivitsy fotsiny ao anatiny, aleon'ny Teflo mifototra kokoa, ary avelao ny hery misintona hanao majika ary izy io palitao izany tariby izany. Ny ankamaroan'ny tariby maoderina kosa dia efa mifono Teflon, izany hoe na ny atin'ny anatiny na ny atin'ny anatiny tariby ivelany.
Raha izany no tranga mahazo anao, manaikitra fotsiny ny bala ary asio tariby vaovao. Manantena aho fa ireo sombim-pitiavana kely ho an'ny freins de rim dia nanampy anao. Ary ankoatr'izay, tiako ho fantatra ny fomba itiavanao ny freinsinao eo amin'ny faritra misy ny hevitra amin'ity lahatsoratra ity miaraka amin'ny namanao.
Ary raha mbola mampiasa freins rim ianao aorian'izany rehetra izany, kitiho eto raha hijery ny fomba hikarakarana preno disc, angamba ianao no hanao ilay fanovana.
Ohatrinona ny vidin'ny fanoloana pad padres?
nyvidin'ny fanoloana pad frezy eo ho eomanodidina ny $ 150 isaky ny mpiray, fa ireovola lanyafaka miakatra hatramin'ny $ 300 isaky ny axe arakaraka ny fiaran'ny fiaranaofreins padFitaovana. Ny lafo indrindrafreins padmampiasa fitaovana voajanahary.
Atsangano ny moterao, anio aho hiresaka momba ny rafitra fanidiana amin'ny fiara. Rehefa mitranga ny zavatra sasany dia lazainy aminao fa tonga ny fotoana fanamboarana ny freins. Ny olana mahazatra indrindra dia izao: lany ny freins, nipaoka freins ianao ary nanomboka nandre tabataba, izao dia mbola tsara be ireo pad freins, mihamainty izy ireo, saingy tsy tonga hatrany amin'ny ny lamosina vy rehefa manify dia manify ilay izy dia aodina amin'ny lamosina vy dia henonao tabataba mahatsiravina rehefa mikitroka amin'ny rotor ny metaly, misy pads frein sasany izao misy squeakers kely, izy ireo dia vy vy kely izay tonga mivoaka ary rehefa mihamainty ny padanao dia hampitsoka ilay kapila vita pirinty ity squeaker kely ity ary ho renao fa mipetaka izy io rehefa mitondra fiara.
Raha maheno an'ity feo ity ianao dia mandehana mankany amin'ny kodiaranao ary zahao izy ireo, jereo raha tena manify tokoa ireo pad freins. Amin'ny fiara marobe toa an'ity Lexus ity, tsotra tsotra fotsiny ny fisian'ny kodiarana mba hahafahanao mitsofoka amin'ny jiro fandrehitra ary hahitana ny hateviny, ary amin'ity tranga ity dia matevina tokoa izy ireo ka tena tsy mila manova azy ireo ianao , fa eto kosa ny mpandaka azy, hoy izahay fa henonao ny mihetsiketsika azy ireo, fa rehefa afaka kelikely dia tsy afaka intsony ilay squeak, mety ho tapaka ilay gadona vy kely, dia tsy mandre feo ianao mandra-pahatongan'ny vy amin'ny vy ary tara loatra. Ka rehefa henonao fa mihorakoraka izany dia tsara ny maka fanahy azy ireo mba hahazoana antoka fa tsy manify izy ireo ary tonga ny fotoana hanovana ny tampon-tànana, izay no zavatra mora indrindra azonao atao dieny izao na izany na tsy izany. tsotra, matetika ny freins fiara dia mikiakiaka fotsiny satria ny kapila dia miharihary amin'ny rivotra ary ny harafesina dia vita amin'ny vy, ary matetika izy ireo dia manao tabataba kely isaky ny mandeha, ary rehefa ampiasainao dia esorina ilay izy ary ho hitanao izany, hey be ny freinina sisa tavela ary tsy misy mangatsiaka sy tsy misy fivoahan'ny rano, ary betsaka ny olona no hiaina izany ary hahatsapa fa rehefa mihantitra izy ireo dia mihetsiketsika fotsiny ny freins sasany rehefa mihantitra izy ireo rehefa manome torohevitra handahatra ny feo mitabataba. ny torohevitra omeko azy ireo pad pad freety avo lenta, hitako manokana ny Akebonoa ke Bo fantatro fa orinasa Japoney izy io, pads no tsara indrindra nananako mpanjifa izay mampiasa ny rotor-dry zareo miaraka amin'ny gen pads taloha fa tsy te handany vola be amin'ny fiara taloha satria fako io ka nasiako fotsiny Akebonopads ary tsy nitabataba izy ireo taorian'izay, noho izany izy ireo dia tena mamono ilay zavatra mahazatra manaraka izay tsy mandeha amin'ny freins Izany hoe, nokapohinao ny pedal frein nefa nilentika tamin'ny tany izy, angamba tsy tamin'ny fotoana rehetra, fa indraindray, ankehitriny misy zavatra telo afaka manao an'izany, ny roa dia mora zahana, fa ny fahatelo kosa dia ny ABS system tsy, ka ndao hatomboka amin'ny tsotra, rehefa manitsaka ny pedal frein ianao dia misy tehina mandalo ny bighead, ary avy eo ambanin'ny saron'ny fiara dia manosika ny varingarina master izay mandefa tsiranoka hydraulic amin'ny kodiarana rehetra ny tsorakazo, noho izany ny antony iray mahazatra indrindra hanitsihanao ny pedal frein-nao ary mahatratra ny tany dia ny fisian'ny fivoahana ao amin'ny fotony Sy any ho any, ka mankany amin'ny kodiarana tsirairay aloha ianao, dia mijery ilay caliper mba hahitana raha mando izy ary ary tsy izany, manana fantson-tsoaka izy io, mety hivoaka ny fantson-tady ary avy eo dia zahanao mijery ny kodiarana tsirairay avy raha hahita izany eo misy famoahana ve, ankehitriny ny ranon-tsavony dia madio ary marefo be.
Ka raha tianao ho azo antoka fa mety izany, asio zavatra fotsiny eo amin'ny rantsan-tànanao, hitanao fa tena malama izy io, manana fofona tsy manam-paharoa, ary hitanao ny famoahana ary avy eo mila manamboatra an'io faritra mitete io ianao, ankehitriny dia misy ny fivoahan'ny ivelany mora be ny mahita azy, ho hitanao ny faritra mitete ary ho lena daholo, fa indraindray ny varingarin-tseranana kosa dia ratsy ihany, saingy mety ho ratsy toa ny valizy fo ratsy izy, afaka mitete ao anatiny, nandresy ianao raha toa ka tsy mahita zavatra tafaporitsaka, tena mila esorina ny varingarin'ny master, ary raha hitanao fa mando ny lamosina dia midika izany fa mivoaka na indraindray tafaporitsaka ao anatiny fotsiny izy ireo ary tsy manindry zareo, raha sanatria ampiasainao izao master silinder iray hafa no nanao ary insta Marina izany, raha tsy ilay tompony dia mahasarotra azy, mety ho ny booster frein io, miverina eto ny booster frein afoster booster, izany dia ny hery famporisihana hanome anao freins, ary raha vaky ny booster dia azonao atao izany mahazo pedal izay mandeha amin'ny tany, fa ity misy fomba mahazatra hitsapana azy rehefa t moteur izy ao anaty fiara dia mijanona ary mikapoka ny freins ianao ary tsara sy henjana izy io, fa avy eo ampandehanana ny fiara ianao ary avy eo dia mikapoka ny frein-dry zareo ary nianjera tamin'ny tany izy ireo 'izay fomba iray tsara hitsapana raha ratsy ny booster rehefa mandeha ny fiara ary ny booster dia manana fisondrotana tanteraka ary avy eo midina ny pedal, midika izany fa ratsy ny booster, saingy misy ny scenario amin'ny fiara maoderina rehefa midina mankany ambany ny frezy izay tena be pitsiny sy lafo vidy amin'ny fanamboarana Misy rafitra braking tena be pitsiny, azonao atao ny mahita ny tsindry frein izay tonga amin'ilay vatan-tsolika lehibe mankany amin'ity valizy solenoid goavambe ity izay misy valves, mandeha ny solosaina, misy kodiarana ABS ireo kodiarana izay mandrefy ny hafainganan'ny fihodinan'ny kodiarana sy ny solosaina dia mamaky ny hafainganan'ny fiara hahatratra raha toa ka mijanona amin'ny hafainganam-pandeha ireo kodiarana rehetra na raha mijanona kely noho ny hafa ny iray dia mody tahaka izany freins Break izany mba tsy hisintona ny ilany na ny ankilany ary raha tsy mahomby ity rafitra ity dia mila manana c solosaina omplicated toa ity Launch X431 ity ary nampiasako fa amin'ny mekanika matihanina dia tsy maintsy mamakafaka ny rafitra ABS izahay, manamarina ny actuators rehetra, manamarina ireo sensor hafainganana ary matetika raha tsara vintana ianao dia hanana kaody ABS ary hahazo farafaharatsiny isika faritra iraisana izay misy ny olana mba hahitantsika ny lesoka ary amboarantsika izany, tsy ilaina intsony ny milaza fa tsy afaka manao izany ao an-trano ianao, saingy soa ihany fa ny rafitra ABS dia rafitra azo antoka amin'ny ankamaroan'ny fiara maoderina. Ka raha tsy mahomby ny rafitra ABS anao ary mirehitra amin'ny ankamaroan'ny fiara ny jiro ABS anao dia hiverina amin'ny freins tsy ABS mahazatra ianao ary afaka mijanona tsara ny fiaranao, tsy hanana rafitra fanamafisam-peo manohitra hidy izany, ka noho izany raha izany dia misy kodiarana sy rano azo entina ary mamily lalana amin'ny lalana maina no miposaka ary mila miteny betsaka amin'ireo mpanjifako aho rehefa mamakafaka ny olan'ny ABS dia mahita fa mila modulator vaovao ary ny modulator dia mitentina dimy hetsy ariary, maro hiteny, eny eny, miaina tsy misy ABS aho ary manana freins mahazatra fotsiny ary na dia nisy nilaza taminao aza fa mila modulator dia tsy afaka manolo tena ianao satria mila mandeha ny rivotra avy amin'izy ireo dia mila iray amin'ireo solosaina ireo ianao manana dingana samihafa manokatra sy manidy ny solenoida hanala ny rivotra amin'ny rafitra ary rehefa mametraka vaovao ianao dia ho feno rivotra ny iray vaovao ary afaka manao ny iray amin'ireo aza ny tena asa indraindray dia maharitra adiny telo na efatra hamoahana ny rivotra rehetra amin'ny rafitra ary ny tendroniko farany dia raha miresaka rivotra isika ao amin'ny rafitra dia maro ny olona no hiteny, oh, mila mandeha rà mandriaka aho, manana rivotra ao anaty rafitra aho, mandeha tsara ny frein, raha tsy misy asa vita amin'ny fiara, tsy misy tena hanamboatra azy io fix ng , satria raha misy rivotra ao amin'ilay rafitra dia misy antony fa misy rivotra ao amin'ilay rafitra, mety mitroka rivotra ny varingarin'ny master, mety misy fantsana mihetsiketsika ary raha esorinao ny tongotrao, dia hitsentsitra ny rivotra izy, fa ahoana kosa raha manana rivotra ianao? Ao amin'ny rafitrao, tianao ny hahalala ny antony sy manamboatra azy. Aza mieritreritra fa ny fanamafisam-peo dia hanamboatra irery ny zava-drehetra.
Ankehitriny fantatrao bebe kokoa momba ny freins ary fantatrao hoe rahoviana no hijerena azy ireo ary inona no hatao momba azy ireo mba hahafahanao mitondra fiara soa aman-tsara eny an-dàlana nefa tsy midona amin'ny olona. Ka raha tsy te hahita ny lahatsoratra fanamboarana fiara vaovao nataoko indray ianao, dia alao antoka fa haneno lakolosy ianao!
Ohatrinona ny vidin'ny fanoloana pad pad sy rotors?
A fenofanamboarana freiniray izay misyfisaka sy mivelatra,Fanodinaary ny fanoloana caliper dia matetika eo anelanelan'ny $ 300 sy $ 800. Na izany aza, arakaraka ny maodely sy ny maodelin'ny fiaranao no ahafahanao mandany $ 1.000 mora foana amin'ny famitana fenonotapahinyasa.
Azonao atao ve ny mitondra fiara miaraka amin'ny pad frein ratsy?
Araka nyiSIKAhoy, mitohymitondra fiara miaraka amina pad freinmampidi-doza, aryianareotsy tokony hamela anao mihitsyfisaka sy mivelatratonga amin'ny teboka aizaianao dia afakamaheno feo mikotrokotroka mafy. Ny feo mitoto dia ny feon'ny vy amin'ny vy, ary manondrofreins padizay efa tanterakaefa tontamidina.
Azonao atao ve ny manamarina ny pad padanao nefa tsy manala ireo kodiarana?
Minoa na tsia, amin'ny ankamaroan'ny fotoanaazonao atao ny manamarina padanaovan'ireotsy manala ny kodiarana. SYianareotsy milanymari-pahaizana injeniera mekanika hoAzaizany. Matetika,ianao dia afakajereo nyfreins padamin'ny alàlan'nykodiaary tsy milaesoryizany. , indray mandehaianareotadiavo nyfreins pad, jereo ny hateviny.
Inona no mitranga raha mitondra fiara miaraka amina pad frein tonta ianao?
Rehefa mitondra fiara efa tonta ianaoavyfreins pad, rotors, na calipers,ianareomety ho hitanao fa mikorontana amin'ilaynotapahinymandeha tongotra matetika kokoa mba hampiadana na hampiato ny fiara. Mafy izany rehetra izanyfreinsanaovan'ireonyhaingana ny kodiarana na mahatonga azy ireo ho lasa tsy mahay mandanjalanja, mitarika fanaovana akanjo tsy mitovy.
Tokony soloinao indray mandeha ve ny pad frein 4 rehetra?
Saingy, rehefa miovafreins pad,tokony hataonao daholo ve ny efatraamin'ny, indray mandeha? Voalohany,ianareotanterakatokony hisolosamy aloha na aoriana aorianafreins padao amin'nyfotoana mitovy. Raha tsy hoe misy zavatra tsy mety,tokony hisymanao akanjo lava mitovy amin'ny iray hafa.01.04.2019
Azoko atao ve ny manova pads frein?
A: Raha tsy mitafy ny hatevin'ny rotors ny rotors dia aleontsikahanoloananyfisaka sy mivelatraihany. Tsy vitan'ny hoe mihary vola fotsiny izany, fa ny fotoana. Vaovaofisaka sy mivelatratsy maintsy hodorana amin'ny rotors vaovao alohan'ny ahatanterahana ny fampisehoana freins tsara indrindra.07/18/2015
Rahoviana aho no mila manolo ny pads novakiko?
Ny takelaka freins dia mila soloina indraindray, indrindra amin'ny ririnina, satria mahazo grit sy grime bebe kokoa amin'ny arabe mando izy ireo. Misy kilasy roa lehibe amin'ny freins: frein rim sy frein disc. Ny freins Rim - izay mety ho v-freins na cantilevers - dia matetika no hita eny an-dalana na bisikileta hybrid ary ny pads dia miraikitra amin'ny sisiny mba hampitsaharana anao.
Impiry no mila soloina ny freins disc?
Ny freins de disc dia matetika hita amin'ny bisikileta an-tendrombohitra, hybride sasany, ary vao haingana eny amin'ny bisikileta eny an-dalana sy cyclocross. Misy pads frein ireo izay mifikitra amin'ny kapila eo afovoan'ny kodiarana hisakanana anao. Amin'ireo tranga roa ireo, rovitra ny pads rehefa mandeha ny fotoana ary mila soloina, angamba in-droa isan-taona, saingy miankina amin'ny fampiasana azy io.
Karazan-damba frein inona no ampiasain'ny bisikileta an-tendrombohitra?
Ny freins de disc dia matetika hita amin'ny bisikileta an-tendrombohitra, hybride sasany, ary vao haingana eny amin'ny bisikileta eny an-dalana sy cyclocross. Misy pads frein ireo izay mifikitra amin'ny kapila eo afovoan'ny kodiarana hisakanana anao. Azonao atao ny mahita ny fahasamihafana misy eo amin'ny pad frezy tonta sy vaovao eto